Distance Learning - Soomaali / Gacaliye Qalinjabiye 2020 iyo Qoysaska
May 18 - Fasalada Sharafta leh ee 9-11 Qoysaskooda
Dhibcaha Waxbarashada Guriga
Fasalka Sharafta leh ee 2020 iyo Qoysaskooda
Gacaliye Degmo 742 Qoysaska Dugsiyada Hoose
Kheyraadka Caafimaadka Maskaxda Ardayda ama Qoysaska
Liiska hubinta qoyska
Gacaliye Qalinjabiye 2020 iyo Qoysaska
Posted by Tami DeLand on 5/10/2020 12:00:00 PM
Gacaliye Qalinjabiye 2020 iyo Qoysaska,
Hambalyo! In kasta oo tani aysan ahayn Xilli aad sugaysay ama lafilayay, waxaan kuu taagnay salaan sharafeed ah guusha aad gaartay. Waxaad muujisay geesinimo iyo niyad, waxaana dooneynaa inaan u dabaaldegno oo aan sharafno qalin-jabintaada.
Annagooba qorsheynay dabbaal-daggaada, waxaan sidoo kale mudnaanta siinnay caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena, qoysaskooda, iyo shaqaalaheenna. Nasiib darrose, qodobbada hadda jira ee ay soo saareen Xarunta Xakameynta Cudurrada iyo Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay naga reebeen qabashada isku imaatinka waaweyn. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay ku saleysan tahay tixraaca Qalinjabiyaha 2020 ee ardayga iyo qoyska, waxaan diyaarinay taxane ah aqoonsiyo iyo munaasabado si aan u sharrafno dadaalkaada. Waxaad kaheli doontaa macluumaad ku saabsan mid kasta oo ka mid ah dhacdooyinka soo socda maamulaha dugsigaaga dhawaan.
Bisha Meey 11 & 12: Qalinjabiye 2020 Qaybinta Qalabka
Qaybinta Koofiyadaha & Toobabka iyo Dayrka/Saxiixa Daaqada ee Qalinjabiyaha 2020 waa 11 Meey laga bilaabo 12-8 fiidnimo iyo 12 Meey laga bilaabo 8-4 galabnimo goobtuna waa Apollo iyo Tech High School.
Meey 26 & 27 (maalinta cudur-daarka Meey 28): Shahaado Gudddonsiin Shakhsiyadaha
Shahaado ayaa la guddoon siin qofkiiba qalin-jabinta. Ardayda waxa soo raaci kara 5 qof waxuuna kaheli doonaa garoonka ama hoolka masraxa shahaado iyadoo ay kuxiran tahay xaalada cimilada hawada. Ardayda waa inay xirtaan koofiyadooda iyo toobkooda ama dhar caadi ah; sawirro hagaagsan ayaa la qaadi doonaa. Ardayda iyo qoysasku waxay fursad u heli doonaan inay sawirro dheeri ah looga qaado aagagga ladiyaariyay ee iskuulka ama bannaanka iskuulka. Fadlan la soco haddii sawir qaadistu ay ahaato gudaha mid kamid ah dhismayaasheena, qof walba wiisito ayuu ka mari albaabka si' loo hubiyo caafimaadka iyo nabadgelyada dadka oo dhan.
Meey 28: Maalinta Qalin-jabinta Tech
· Muuqaal-Bandhigeed ah Ardayda Tech ayaa laga daari doonaa maalintii oo dhan sabuurada dhijitaalka ah ee ku yaal 33rd-ka iyo waddada Division-ka ee qaabilsan Moolka Crossroads.
· Gawaari Bandhigeed Ardayda sare ee Tech oo mac-salaamaynaya iskuulka Tech iyo shaqaalaha McKinley ayaa istaagi doona Tech laga bilaabo 5-6:30 makhribnimo.
· Muuqaalka Munaasabadda Qalinjabinta ee Hawada ayaa si' toos ah ooga socon bogga Degmada, Bogga iskuulka Tech, iyo Jannalka 179 wakhtiga 7:30 fiidnimo.
Meey 29: Maalinta Qalin-jabinta Apollo
· Muuqaal-Bandhigeed ah Ardayda Apollo ayaa laga daari doonaa maalintii oo dhan sabuurada dhijitaalka ah ee ku yaal 33rd-ka iyo waddada Division-ka ee qaabilsan Moolka Crossroads.
· Gawaari Bandhigeed Ardayda sare ee Apollo oo mac-salaamaynaya iskuulka Apollo iyo shaqaalaha McKinley ayaa istaagi doona Apollo laga bilaabo 5-6:30 makhribnimo.
· Muuqaalka Munaasabadda Qalinjabinta ee Hawada ayaa si' toos ah ooga socon bogga Degmada, Bogga iskuulka Apollo, iyo Jannalka 179 wakhtiga 7:30 fiidnimo.
Juulay 16 & 17: Aqoonsiga iyo dabaal-dagga Qalinjabiyaha 2020
Hadii caafimaadka iyo nidaamka uu noo ogolaado, waxan dib u kulmin doonaa qalin-jabiyayaasha 2020 bisha Juulay 16 iskuulka Tech iyo bisha Juulay 17 iskuulka Apollo goobta loo yaqaan River’s Edge Convention Center si’ loogu aqoonsado oo loogu dabaal dago munaasabada. Macluumaad dheeraad ah ayaa labixin doonaa markay taariikhdu soo dhawaato.
Hambalyo, Qalinjabiye 2020!
Willie Jett, Superintendent